သက်ဝေ: Fashion Show
:P October 19, 2010 at 10:55 AM
အမိုက်စားလေး ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်တော်တော်လှတယ်..
Mon Petit Avatar October 19, 2010 at 10:59 AM
Thanks for sharing, I love them all: the hair, the accessories, everything is beautiful.
TURN-ON-IDEAS October 19, 2010 at 11:15 AM
ကျနော်လဲ အဲဒိအနွေးထည် ကြိုက်တယ်...
နောက်တစ်ခါ ဘယ်မှာ ပွဲရှိတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရင် ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာ Sister... :)
Vista October 19, 2010 at 11:41 AM
မြူးမြူး October 19, 2010 at 12:12 PM
နောက်ဆုံးပုံက မော်ဒယ်ဝတ်ထားတာလေးလှတယ်.. ရှေ့ကတော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိ.. :)
မြူးမြူး October 19, 2010 at 12:14 PM
အဲ.. ရှေ့ကပုံတွေ့ပြီ.. ဘာလို့ ပိုက်ဆံအိတ်ကြီး လည်ပင်းဆွဲထားလဲမသိဘူး အဲဒါကြီးမပါရင် လှမှာ
ချစ်ကြည်အေး October 19, 2010 at 1:18 PM
လှတယ်၊ ပုံတွေကောင်းပါ့၊ ဒဏ်ကြေလူးဆေး အိမ်လာလူးပေးရမလား၊ ဘာကျွေးမလဲ ဟမ် !!!
လင်းဒီပ October 19, 2010 at 1:29 PM
မျက်စိနောက်တယ်ရယ်လည်း ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ အစ်မရယ် ။
တင်တော့လည်း ကြည့်ရတာပေါ့ ။
နောက်ခါဆို ခြေထောက်ရှည်ရှည်လေးတွေပါ ထည့်ရိုက်ပေးနော် ။ :P
P.Ti October 19, 2010 at 1:49 PM
ပင်ပန်းလွန်းလို့ အဲဒါတွေ မရိုက်ဘူး.. ဟိ...
ငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့ မော်ဒယ်ကိုပဲရိုက်တော့မယ်... ပန်းတွေ ရှုခင်းတွေပြောပါတယ် :P
မိုးငွေ့...... October 19, 2010 at 3:07 PM
ညီမလေးလဲ ဟိုနေ့က မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက် မင်္ဂလာဝတ်စုံပွဲသွားသေးတယ်မမ...
ပုံတွေတော့ရိုက်လာတယ် ဖဘထဲလာကြည့်လှည့် ဘလောက်မှာတော့မတင်တော့ဘူး ငါ့အမလက်ရာလောက်မကောင်းဘူး...။
rose of sharon October 19, 2010 at 5:24 PM
I like all, Thanks alot for sharing.I like watching the fashion show.
စုလတ် October 19, 2010 at 6:07 PM
ကောက်လိုက်ကြ ဖြောင့်လိုက်ကြ ဖြောင့်လိုက်ကြ ကောက်လိုက်ကြ သံသရာလည်တယ်ဆိုတာ ဒါပဲး)
တုံးတယ်ပြောပြော မခံစားတတ်ဘူးရယ် ဖက်ရှင်ရှိုးကို .. ကိုယ်က ဝ၀လှလှလေးမို့ လို့လားတော့မသိဘူး သူတို့တွေကို သိပ်ပိန်လွန်းတယ်လို့ ခံစားရတယ် ဟိဟိ
လသာည October 19, 2010 at 7:02 PM
အားလုံး အမိုက်စားလေးတွေပဲ.. အမောကိုပြေသွားတာပဲးD
နောက်တခါရိုက်ရင်ပြောလေ..အစ်မ။ ကင်မရာကိုင်လို့ညောင်းတဲ့လက်ကို ထမ်းပေးထားမယ်..ဟဲ
မောင်လေး October 19, 2010 at 7:05 PM
လည်း မဟုတ်ကြပါဘူးနော်..။အမိုက်စားလေး ဆိုတဲ့
တစ်ယောက်က တကယ်ကို လှတယ်ဗျ။
ကလူသစ် October 19, 2010 at 7:58 PM
ပုံလောက်နဲ့ အားမရဘူး။ကိုယ်တိုင်အားမပေးလိုက်ရတာနာတာပဲကွာ။ :(
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 19, 2010 at 8:38 PM
ကြည့်ရင်းနဲ့ သူတို့လို စင်ပေါ်တက်ပြီး လျှောက်ချင်လာမိတယ်...
စင်ပြိုကျမှာ ကြောက်လို့သာ ငြိမ်နေရတယ်...
Tun Tun October 19, 2010 at 8:39 PM
မော်ဒယ်ပုံတွေ ရိုက်ထားတာ တော်တော်ကောင်းတာပဲ။ ကျွန်တော်ကင်မရာ canon က ဖလပ် အလုပ်လုပ်တာ နှေးတော့ အဲ့လိုပွဲတွေ ရိုက်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ;(
AMK October 19, 2010 at 8:49 PM
TZA October 19, 2010 at 11:03 PM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း October 19, 2010 at 11:13 PM
ဒီမော်ဒယ်တွေကို cat walk တော့မလျောက်ခိုင်းတော့ဘူး............... လျောက်ခိုင်းရ ကောင်းမှာပဲ
တို့ကတော့ အမေကောက် ပေးတယ်။
T T Sweet October 19, 2010 at 11:28 PM
ပုံလေးတွေလှတယ်။ ဟိုရောင်စုံအင်္ကျီနဲ့ အမိုက်စားလေး ကြိုက်တယ်။ အကြေကောက်တွေ ပြန်ခေတ်စားပြန်ပေါ့။ ငယ်ငယ် ရူးရူးမိုက်မိုက်တုံးကတော့ တစ်ခါ ကောက်ဖူးတယ်။
မက်မွန် Mon : မွန်ရဲ့ winter fashion ကတော့
အ၀တ်ပုံလုံးကြီးပါပဲ။ ဒါမှနွေးမှာလေ ဟိ...
ဇွန်မိုးစက် October 20, 2010 at 12:04 AM
မော်ဒယ်ဂဲလ်တွေ မြင်တော့ ငယ်ငယ်က မော်ဒယ်လုပ်ချင်စိတ်ပေါ်ခဲ့သေးတာ အမှတ်ရသွားတယ်။ တီဗွီမှာ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုလ်တုသတင်းထဲ ဖက်ရှင်ရှိုးလာရင် အပြေးအလွှား ကြည့်ရတာ။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာတစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် စိတ်ကူးလက်ရာလေးပေါ့ ... အဟိ။
mae October 20, 2010 at 4:24 AM
လှတယ် မမသက်ဝေ.. အကြေကောက်တွေ ခေတ်စားနေပြန်ပီလား မသိဘူးနော်
ူlondon မှာလဲ fashion show တွေ ရှိတယ်.. မသွားဖြစ်ဘူး.. singapore မှာတော့ နှစ်ပေါက်လုံး ဒီအဝတ်တွေပဲ ဝတ်နေမိလို့..ခုတော့ in season ဆိုတဲ့ စကားက အရမ်း သက်ရောက်တာပဲ..
ဒါပေမယ့် နေတာ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ အရေလဲ ထူလာတယ်..ဒီနေ့ autumn ပဲ ရှိသေးပေမယ့် 7.5 ပဲတဲ့.. ဝတ်သွားတာ ဘောင်းဘီအပါးလေး တထပ်ထဲရယ်..
သဒ္ဓါလှိုင်း October 20, 2010 at 3:17 PM
ဖြူ October 20, 2010 at 4:27 PM
ဓါတ်ပုံတွေ သိပ်လှတယ် သက်ဝေ
ကိုယ်တိုင်က ဖက်ရှင်မကျပေမယ့် အခုလို ဖက်ရှင်လှလှတွေတော့ ကြိုက်ပါတယ်
နောက်ကို ဓါတ်ပုံတွေ များများရိုက်နိုင်အောင် ကင်မရာကိုင်ရင် လက်မနာအောင် အားရှိအောင် အစား များများစားပါ… :P
သိင်္ဂါကျော် October 20, 2010 at 6:49 PM
အမိုက်စားလေးတွေ ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းတယ်.. :)
သက်ဝေ October 20, 2010 at 10:37 PM
Model တွေကို အားပေးသွားကြသူများ အားလုံး အားလုံး ကျေးဇူးအထူးပါ...
လက်အကိုက်ခံပြီး ရိုက်ရကျိုးနပ်တယ်ပြောရမှာပေါ့... နောင်ကိုလဲ ရိုက်ပါအုံးမယ်... အဲဒီအခါကျရင်လဲ လာအားပေးကြပါအုံးနော်...း))
Moe Cho Thinn October 21, 2010 at 6:11 AM
အောက်ဆုံးကပုံက အာရှသူလေးဆိုတဲ့ တယောက်ပဲ မဟုတ်လား။ သူ မဆိုစလောက်လေး ပြုံးနေတာ ချစ်စရာ..။
ရှိုးတွေမှာ ရုပ်သေကြီးနဲ့ ဆတ်တောက် ဆတ်တောက် လျှောက်နေတာ အရုပ်တွေ ခလုတ်နှိပ် လွှတ်လိုက်သလိုမို့ မကြိုက်ဘူး။ ဟားတိုက် ရီမော နေရမယ်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလောက်ဆို အိုကေပါတယ်။
Hmoo October 24, 2010 at 6:41 AM
theint theint March 3, 2012 at 1:44 PM